Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Puntland oo ka bilaabaneysa Garoowe – Kalfadhi
Doorashada Guddoonka Baarlamaanka Puntland oo ka bilaabaneysa Garoowe
Maanta, waxaa lagu wadaa in Golaha Wakiillada Puntland ee cusub ay ku doortaan xaruntooda magaalada Garoowe Guddoonkooda, halkaas oo ay hadda ka socoto u diyaar garowga doorashadaas. Xildhibaannada Puntland ayaa lagu soo warramayaa iney hadda dhageysanayaan qudbadaha musharraxiinta u taagan Guddoonka Golaha Wakiillada Puntland, oo ka badan 5 Musharrax.
Guddoomiyaha Ku-meel-gaarka ah ee Golaha Wakiillada Puntaland Xildhibaanno uu ka mid yahay, siyaasiyiin ay ku jiraan Musharrixiinta Madaxweynaha Puntland iyo qeybo kale oo ka mid ah bulshada Puntland ayaa horay u sheegay iney ku rajo weyn yihiin iney doorashadu ugu dhici doonta si sox iyo xalaalba ah.
Marka uu Baarlamaanka Puntalnd maanta doorto Guddoonkiisa, waxaa lagu wadaa inuu Guddoonkaasi ka shaqeeyo soo doorashada Madaxweynaha Puntland, oo iyana lagu balansan yahay iney dhacdo 8-da bishan, oo ku began Talaadada ina soo aaddan, taas oo ay ku tartamayaan in ka badan 30 Musharrax.
Kala ra’yi duwanaantu ma quudineysaa Dowladnimada Soomaaliya?
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo goordhaw la doortay